स्थापना दिवसको अवसरमा लेखनाथको सामाजिक कार्य
कास्की । पोखरा महानगरपालिका-२६, आघौंस्थित लेखनाथ वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले माघ २७ गते आफ्नो १३औं स्थापना दिवस एवम् १२औं बार्षिक उत्सवका अवसरमा सामाजिक कार्य गरेको छ । स्थापना दिवसको
एकीकरणका लागि महासंघको पहल
ललितपुर । विषय मिल्दा संघहरुको एकीकरण प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आज एकीकरण कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित १२ वटा केन्द्रीय संघहरुलाई
आधारभूत सहकारी लेखापालन तालिम सम्पन्‍न
कञ्चनपुर । जिल्लास्थित वेदकोट नगरपालिकाको आयोजनामा यही माग २४ गते बाट सञ्चालित पहिलो चरणको ६ दिने आधारभूत सहकारी लेखापालन तालिम आज सम्पन्न भएको छ । तालिममा नगरपालिकाका वडा नं १
कानुनी व्यवस्था तथा बजारीकरण तालिम सम्पन्‍न
पनौती, काभ्रे । नेफ्स्कूनले व्यवसाय विकास सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रेको पनौतीस्थित सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का १० जना महिला उद्यमी सदस्यहरुलाई लेखापालन, कानुनी व्यवस्था तथा बजारीकरण सम्बन्धी
सहकारी प्रतिनिधिहरुद्वारा नापी कार्यालय अनुरोधपत्र
मकवानपुर । नापी कार्यालय मकवानपुरले सहकारी संस्थाहरुलाई जग्गाको ट्रेस नक्सा लगायत विविध कार्य सहजताका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । आज नेफ्स्कून फिल्ड कार्यालय मकवानपुर, जिल्ला बचत संघ
साकोसहरु अब उद्यमी सदस्य निर्माणमा केन्द्रित
ललितपुर । प्रोवेसन बाग्‍मती क्‍लष्‍टर पहिलोको २० कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला श्रीमाई बज्रबाराही साकोस ललितपुरको आयोजना तथा नेफ्स्कूनको प्राविधिक सहयोगमा आज २७ गते सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा काभ्रे,
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफ्स्कूनबीच सम्पन्न आधारशिला कार्यक्रममा सम्झौता भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा २ दिने सहकारी सचेतना कार्यक्रम आज सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा कार्यक्रम
काठमाडौं । नेफ्स्कूनले आज साकोस सञ्जाल एवम् संघको सेवा तथा व्यवसायहरु सम्बन्धमा काठमाडौंको सतुंगलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नेफ्स्कून कलंकी फिल्ड कार्यालयको अग्रसरतामा भएको कार्यक्रममा कलंकी र आसपासका
झापा । नेफ्स्कून फिल्ड कार्यालय दमक झापाको आयोजना तथा सहकारी समन्वय सञ्जाल कमल गाउँपालिका झापाको संयोजनमा सम्भावित सदस्यहरुसँगको एक दिवसीय अन्तरक्रिया गत शुक्रबार सम्पन्न भएको थियो । चन्द्रदर्शन साकोस कमल
स्थापना दिवसको अवसरमा ग्रामीण साकोसको सामाजिक कार्य
सल्यान । जिल्लाको शारदा नगरपालिका–२ खलंगास्थित ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले आफ्नो स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा विविध सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्थापना दिवसको अवसर पारेर